မိတ်ဖက်, Affiliate နှင့်ဂိမ်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကို ဦး တည်သည့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့၏မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ၊ မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ၊ မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများ၊ တွဲဖက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အစီအစဉ်များအောက်တွင်ဂိမ်း, ဂိမ်းအခွင့်အလမ်းများ, စီးပွားရေးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ဂိမ်းစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ။
မိတ်ဖက်ဝင်မည် / မှတ်ပုံတင်မည်
သုညရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်နာများ အဖွဲ့ပံ့ပိုးမှု
franchise အစီအစဉ်၊ မိတ်ဖက်အစီအစဉ်နှင့်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များအတွက်အောင်မြင်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်မှီသောရောင်းအား ၃ ခုအပြီးစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိရယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကမ္ဘာတ ၀ န်းမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများအားမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်သောအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ မိသားစုအတိုင်ပင်ခံ၊ ဥပဒေအကြံပေး၊ မဟာဗျူဟာအကြံပေး၊ ဘဏ္Consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဗီဇာအကူအညီပေးခြင်း၊ စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးခြင်း၊ HR ပြင်ပအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဦး ခေါင်းအမဲလိုက်ခြင်း၊ ပါရမီရှင်များရယူခြင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်မှာအရင်းအနှီးများမလိုအပ်သောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ အခွန်အတိုင်ပင်ခံများ၊ စာရင်းကိုင်စာရင်းကိုင်များ၊ ရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်သူများ၊ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘဏ္Companiesာရေးကုမ္ပဏီများ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိအခမဲ့ Lancers၊ ကျွမ်းကျင်သောကြားခံများ၊ ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ပုံမှန်ဖောက်သည်များ။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင်လိုအပ်သောအထူးပြုလေ့ကျင့်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ပေးသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်ကိုယ်စားသင့်ဖောက်သည်များကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအထောက်အကူ၊ အိုင်တီဖြေရှင်းချက်များ၊ virtual ရုံးများ၊ VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နိုင်ငံတကာ virtual နံပါတ်များ၊ CRM ဖြေရှင်းမှုများ၊
သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏လယ်သမားများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ရှိပြီးသားဖောက်သည်များသို့ရောင်းချရန်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
"ရိုးရာနှင့်အွန်လိုင်း ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်နည်းစနစ်များမှတဆင့်ဖောက်သည်များကို ဦး ဆောင်ခြင်း။ "
ယေဘူယျအားဖြင့် Leads နှင့် Generate
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အွန်လိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်စျေးကွက်အတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ကြော်ငြာများ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများနှင့်မိတ်ဖက်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်သီးခြားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွလုပ်ဆောင်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
သင်၏အဖွဲ့မှပြုလုပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမို ၀ င်ငွေရရန်သင်၏အသင်းကိုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
* ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် MLM အစီအစဉ်ကိုမှမပြုလုပ်ပါ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်သောအခကြေးငွေများကိုသာရည်ညွှန်းသည်မဟုတ်ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်သင်အောင်မြင်မှုရှိစေရန်သင်၊ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏အဖွဲ့ကိုသင်ကြားရန်၊ လမ်းညွှန်ရန်နှင့်ကူညီရန်သင်လိုအပ်သည်ဆိုပါကသင့်ဖောက်သည်များနှင့်အခြားနေရာများတွင်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးသင်၏အမည်ကိုလည်းလျှို့ဝှက်ထားနိုင်သည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုသင်တိုက်ရိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၏အဖွဲ့အားငှားရမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း၊
မိတ်ဖက်လျှောက်လွှာတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူ / သူမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ င်ငွေပမာဏနှင့်အတူမိတ်ဖက်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်နှင့်စျေးကွက်တင်ရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုထူထောင်ရန်သင်ကြားပို့ချပေးရန်သင့်အား platform တစ်ခုပေးသည်။
သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်ကိုသင်ရည်ညွှန်းသောအခါသင်၏လွှဲပြောင်း ၀ င်ငွေမှ ၃% ရရှိသည်။ "အသင်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ "
သင်၏တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှုသည်သင်၏လွှဲပြောင်းမှုမှရရှိသောဝင်ငွေအပေါ် ၂% ရရှိသည်။ “ မင်းအတွက် ၀ င်ငွေအလားအလာကောင်းများဖန်တီးပေးခြင်း။
သင်၏အသင်းသည်တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှု၏စုဆောင်းမှုအောက်တွင်ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (သင်) သည်သူတို့ရရှိသော ၀ င်ငွေအပေါ် ၁% ရရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များသည်လူပုဂ္ဂိုလ်အားစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ ပညာရှင်များသို့မဟုတ်အလွတ်များဖြစ်စေ၊ အိမ်ရှင်မဖြစ်စေမည်သူမည်ဝါဖြစ်စေစီးပွားရေးနှင့် ၀ င်ငွေရရန်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု၍ ကော်မရှင်များနှင့်အပိုဆုကြေးများရရှိရန်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများထဲသို့ထည့်ရန်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကိုအလွန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည် ၄ ​​င်းတို့ရည်ညွှန်းထားသောဖောက်သည်များထံမှ ၀ င်ငွေရရှိခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေရရှိခြင်းအပြင် ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
မိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကို Freelancer များကကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အလွန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်အလိုရှိချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
အခွန်အကြံပေး & Chartered
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေရေးရာလေ့ကျင့်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနှစ်ဖက်လုံးမှအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များထံရောင်းချခြင်းနှင့်သင်၏ဝင်ငွေတိုးလာခြင်းများကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များအားကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုအရေအတွက်တိုးလာနိုင်သည်။
Affiliate အစီအစဉ်ကိုအိမ်ရှင်မများမှကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ပြည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလွန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Service Providers
လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးဖောက်သည်များအတွက်နိုင်ငံများစွာ၏ကြီးမားသောပန်းစည်းများကိုထပ်ဖြည့်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်
၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ။
မိတ်ဖက်များနှင့် Affiliate နှင့်နေရာတိုင်းမှာ၏လက်ခံမှု။
၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက်သင်၏ ၀ င်ငွေပမာဏအားလုံးသည်သင်၏ Dashboard တွင်ရှိသည်။
သင်၏နာမည်ကိုဖော်ပြရန်မလိုပဲသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များ၊ ဖရန်ချိုက်စ်များနှင့်ရည်ညွှန်းကိုးကားသူများအတွက်ပုံဖော်ခြင်း
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် * အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများနှင့်တန်ဖိုးများသည်သာပြသပြီးအမှန်တကယ်ရရှိသော ၀ င်ငွေကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ ၀ င်ငွေသည် Partner ရောင်းချသောနှင့်ရောင်းချသော ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်လုံးလုံးမှီခိုရပြီး၎င်းတို့သည်လွှဲအပ်ထားသည့်ဖောက်သည်များထံမှနောက်ဆုံးပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုအပေါ်မှီခိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ရန်မိတ်ဖက်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင်၏အကောင့်တွင်လူတစ် ဦး တည်းရှိသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများအားကူညီခြင်းအပါအဝင် ၀ န်ဆောင်မှုမိတ်ဖက်များအတွက်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
မိတ်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များ၊ franchisees များနှင့်ရည်ညွှန်းမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ထားသောနိုင်ငံများ
Antigua နှင့် Barbuda ရှိမိတ်ဖက်အစီအစဉ်
Puerto Rico အတွက်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်
San Marino ရှိမိတ်ဖက်အစီအစဉ်
New Hampshire ရှိမိတ်ဖက်အစီအစဉ်
Rhode Island ရှိမိတ်ဖက်အစီအစဉ်
franchise အစီအစဉ်အရကျွန်ုပ်တို့အားပေးသော Value ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ Affiliate Program နှင့်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်နှင့်အကျိုးတူအခွင့်အရေးများ၊ တွဲဖက်ခွင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများအသီးသီး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ တွဲဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမဟုတ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းမပြုပါ။
·လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်မရရှိနိုင်ပါ။
·ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သောမိတ်ဖက်များကိုလက်မခံပါ။
·မိတ်ဖက်အစီအစဉ်သည်တရားမ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
·ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သောအသင်းအဖွဲ့များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များနှင့်ဖရန်ချိုက်စ်များနှင့် KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၎င်းတို့အမှားများအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။
အပေါင်းအဖေါ်များ၊ Affiliates နှင့် Franchise မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များ၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံမှကမ်းလှမ်းနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားပြီးထို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံမှသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များမှအသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအားမိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖရန်ချိုက်စ်များမှတဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ မိတ်ဖက်အစီအစဉ်၊ တွဲဖက်အစီအစဉ်၊
“ ၁၀၆ နိုင်ငံကနေ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းချဖို့နဲ့အကြံပေးဖို့ကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဖရန်ချိုက်စ်တွေနဲ့တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေး setup န်ဆောင်မှု
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ တွဲဖက်များနှင့်ဖရန်ချိုက်စ်များသည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို HR ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ င်ငွေမှရရှိရန်အကြံပေးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ client ကိုတိုင်ပင်လိုလျှင်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင့်ဖောက်သည်များအားအကြံပေးခြင်းဖြင့်ငွေရှာပါ။
နိုင်ငံပေါင်း 106 အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ
သင်၏ဖောက်သည်များအားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု.
လက်မှတ်ရလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရှင်များသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Parnership အစီအစဉ်
သုည၊ သင်တစ်ပြားတည်းပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏သင်တန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ဂိမ်းအစီအစဉ် | Affiliate Program ကို | မိတ်ဖက်အစီအစဉ်
၀ န်ဆောင်မှုတိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်သင်၊ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏အဖွဲ့ကိုသင်အောင်မြင်အောင်သေချာစေရန်သင်၊ သင့်ဖောက်သည်များထံမှတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးသင်၏အမည်ကိုလျှို့ဝှက်ထားလျှင်လည်းအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်၊ လေ့ကျင့်၊ လမ်းညွှန်ပေးမည်။ မင်းလိုချင်တယ်
ဂိမ်းအစီအစဉ်များ | Affiliate Programs ကို | မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ
ဒါက Ponzi အစီအစဉ်လား
သင်မရင်းနှီးလျှင်၊ ၎င်းသည် Ponzi အစီအစဉ်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာပြီးအထူးဝန်ဆောင်မှုများပေးကြသည်။
franchise အခွင့်အလမ်းများ | မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများ | Affiliate အခွင့်အလမ်းများ
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့မှသင်ရည်ညွှန်းသည့်ပါတနာတစ်ခုစီ၏ ၀ င်ငွေ၏ ၃% ကိုသင့်အားပေးမည်။
ဂိမ်းအခွင့်အလမ်း | မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်း | Affiliate အခွင့်အလမ်း
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတနာ၏စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဆေးပါ၊ ထိုတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဂိမ်းအစီအစဉ် | မိတ်ဖက်အစီအစဉ် | Affiliate Program ကို
သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသူငယ်ချင်းများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ရှိပြီးသားဖောက်သည်များထံရောင်း။ လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ရိုးရာနှင့်အွန်လိုင်း ဦး ဆောင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်နည်းစနစ်များမှတဆင့်ဖောက်သည်များကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။
မိတ်ဖက်အစီအစဉ် | ဂိမ်းအစီအစဉ် | Affiliate Program ကို
ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စျေးနှုန်းများ / ဝန်ဆောင်ခများမြင့်တက်လား?
အဘယ်သူမျှမစျေးနှုန်းများ / အခကြေးငွေများမြင့်တက်ကြသည်မဟုတ်, တကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်ကျနော်တို့ပေးအပ်န်ဆောင်မှုများအတွက်စျေးနှုန်းအတွက်အများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်း | ဂိမ်းအခွင့်အလမ်း | Affiliate အခွင့်အလမ်း
မဟုတ်ပါ၊ သင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရည်ညွှန်းနိုင်သောမိတ်ဖက်အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ပါတနာသည်သူ၏လွှဲပြောင်းမှု၏ ၀ င်ငွေ၏ ၃% နှင့် ၄ င်းတို့၏ရည်ညွှန်းမှုများမှရရှိသောဝင်ငွေမှ ၂% နှင့်တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းမှုလွှဲပြောင်းမှုများအောက်မှအဆင့်တစ်ခုလုံးအပေါ် ၁% ရရှိသည်။
မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ရည်ညွှန်းသည် | Franchise Opportunity အတွက်ရည်ညွှန်းခြင်း | Affiliate Opportunity အတွက်ရည်ညွှန်းသည်
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ပါတနာတစ်ခုစီရဲ့ ၀ င်ငွေ၏ ၃% နှင့် ၄ င်းတို့၏ရည်ညွှန်း ၀ င်ငွေများမှ ၂% နှင့်တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းရည်ညွှန်းချက်အောက်ရှိအဆင့်တစ်ခုလုံးအပေါ် ၁% ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်း | Affiliate အခွင့်အလမ်း | ဂိမ်းအခွင့်အလမ်း
လောလောဆယ်တွင်ကတ်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ PayPal၊ Alipay၊ Skrill၊ We Chat Pay စသည့် ewallets များကို cryptocurrencies မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေသည်။ Million Maker Cares သည်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုငွေပေးချေရန်နည်းလမ်း ၁၅၀ ကိုအသုံးပြုသည်။
franchise အခွင့်အလမ်းများ | Affiliate အခွင့်အလမ်းများ | မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများ
အားရှာဖွေခြင်း အယ်လ်ဘေးနီးယား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ, တတ်နိုင် အယ်လ်ဘေးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ, တတ်နိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေအယ်လ်ဘေးနီးယား, တတ်နိုင် အယ်လ်ဘေးနီးယားများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ.
အနိမ့်ဆုံးငွေပေးချေမှုမရှိပါ။ သင်ရရှိသောဝင်ငွေနှင့် $ 20 ထက်မနည်းပါက၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀ ထက်နည်းလျှင်၎င်းသည်နောက်လသို့လွှဲပြောင်းယူသွားပါလိမ့်မည်။
မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများ | Affiliate အခွင့်အလမ်းများ | franchise အခွင့်အလမ်းများ
စာဖြင့်ရေးသားထားသောပစ္စည်းများ၊ အီးမေးလ်ပုံစံများ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ အီးမေးလ်ဖန်တီးမှုများနှင့်အခြားအရာများ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကသင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုလည်းသင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
မိတ်ဖက်အစီအစဉ် | Affiliate Program ကို | ဂိမ်းအစီအစဉ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်၊ ကုန်သည်စာရင်းများ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်အထောက်အပံ့၊ ဗီဇာအထောက်အပံ့၊ အိမ်ခြံမြေအကြံပေးကူညီမှု၊ HR ပြင်ပ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ၊ စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ VoIP ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စိတ်ကြိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ Virtual Office နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Virtual Number Solutions၊ CRM ပေါင်းစည်းခြင်းအစီအစဉ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးသားဖြောင့်မှန်ပါကအကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်း၊ အကောင်းဆုံးတွဲဖက်အခွင့်အလမ်း၊ အကောင်းဆုံးစီးပွားဖြစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်း၊ အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ၊ အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ပရိုဂရမ်များ၊ အကောင်းဆုံးတွဲဖက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ၊ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များမှတဆင့်။
စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်း | Affiliate အခွင့်အလမ်း တွဲဖက်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်း | franchise အခွင့်အလမ်း | မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များ တွဲဖက်အစီအစဉ်များ | Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များ | ဂိမ်းအစီအစဉ်များ
မိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကို ၀ င်ငွေရရှိစေရန်ထောက်ပံ့ပေးသောမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ရင်းမှန်ရှိပါကအကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်အစီအစဉ်နှင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
Affiliate အစီအစဉ်ကို ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောတွဲဖက်အခွင့်အရေးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ရင်းမှန်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးတွဲဖက်မှုအစီအစဉ်နှင့်အကောင်းဆုံးတွဲဖက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုမက်လုံးများရရှိရန်ထောက်ပံ့ပေးသောတွဲဖက်သည့်အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ရင်းမှန်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးတွဲဖက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးတွဲဖက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုပေးနိုင်သည်။
franchise program ကို ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်ပေးသော franchise အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်နှင့်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်ပါသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဖရန်ချိုက်စ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ Register